TCDD’nin Paylaşımına Acılı Anneden Tepki | RayHaber | မီးရထားလမ်း အဝေးပြေး | ကေဘယ်လ်ကား
ပင်မစာမျက်နှာတူရကီMarmara ဒေသကြီး59 CorluTCDD ဝေမျှခြင်းကိုနာကျင်စေသောမိခင်၏တုန့်ပြန်မှု
12 / 10 / 2019 Levent Elmastaş 59 Corlu, 59 Tekirdag, ရထားလမ်း, အထွေထွေ, ခေါင်းစီးသတင်း, Marmara ဒေသကြီး, တူရကီ 1
TCDD'nin သည် luorlu အဖြစ်ဆိုးကိုဝေဒနာခံစားနေရသောသူ့ဇနီးဆုံးပါးသွားသောမိခင်နှင့်သားသည်တုံ့ပြန်ခဲ့ကြသည်။
8 ဇူလိုင်လမှာ 20187ကလူတွေဟာ 25 ကလေးများအပါအ ၀ င်အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ပြီး 340 ဟာTekirdağရဲ့Çorluခရိုင်Sarılarကျေးရွာရထားဘေးအန္တရာယ်ကြောင့်ဒဏ်ရာရခဲ့ပါတယ်။
OdaTVHüreyraOflaz'ınသတင်းအရ; ငါတို့သည်အခြေခံအဆောက်အအုံရှိသည်, တိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်, 163 နှစ်ပေါင်းနောက်ကွယ်မှပြည်မှရထားကနေမြန်နှုန်းမြင့်မီးရထားထားခဲ့ပါ "မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းမီးရထားသဘာဝဘေးအန္တရာယ်များ၏ကာလ၌အကြှနျုပျတို့၏နိုင်ငံ၏အခြေခံအဆောက်အအုံမှလူမှုရေးမီဒီယာအကောင့်ဟုဆိုကာတူရကီပြည်နယ်မီးရထား (TCDD) ၏သမ္မတနိုင်ငံ, တိုးတက်" ငါတို့သည်ငါတို့၏နိုင်ငံ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏ကိုယ်စားယူခြေလှမ်းများအတွက်ဦးဆောင်အခန်းကဏ္ဍယူပျော်ရွှင်နေကြသည် အင်းဒါမျှဝေသည်။
luorlu ရထားဘေးအန္တရာယ်ကြောင့်သားဖြစ်သူOğuz Arda Sel နှင့်ဇနီးဟောင်း Hakan Sel တို့ကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရသော Mssra Öz Sel သည် TCDD ကိုတစ်ဖန်တုံ့ပြန်ခဲ့သည်။
Mssra Öz Sel သည်သူမ၏ကိုယ်ပိုင်တွစ်တာအကောင့်မှ TCDD ကိုခေါ်ခဲ့သည်။ erken သင်သည်ကျွန်ုပ်တို့သည်တိုးတက်ကောင်းမွန်သောအခြေခံအဆောက်အအုံများအလုပ်လုပ်သည်ဟုပြောသည့်တိုင်လိမ်ရန်ရှက်ရွံ့ခြင်းမဟုတ်လော သင်ကြော်ငြာမထွက်ခင်လုံခြုံသောနည်းလမ်းများကိုပေးပါ။ အခြားလူများမသေပါစေ။ အဆိုပါ @aihsanuyg "
Mssra Öz Sel သည်ရထားဘေးနှင့်ကြုံတွေ့ခဲ့ရစဉ်ကသူမ၏ဘ ၀ တွင်ကလေးများ၏ဓာတ်ပုံများကိုထည့်သွင်းခဲ့သည်။
Da infrastructureorlu သင်၏အခြေခံအဆောက်အအုံတိုးတက်လာမှုတွင် Yaris သည်ဤအပြစ်မဲ့သော7pup နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ 18 လူမျိုးတို့၏အသွေးရှိသည်။ မင်းတို့ရဲ့ရထားတွေဟာနေ့တိုင်းသူတို့ပြေးနေကြတယ်။ သင့်ရဲ့အဖွဲ့အစည်းမှာတကယ့်ပြည်တွင်းရေးစုံစမ်းစစ်ဆေးမှု! အပယ်ခံ! လုံခြုံတဲ့လိုင်းတွေလည်းမရှိဘူး။ ဤကြော်ငြာများပြုလုပ်ရန်သင်မရှက်ပါသလော။ @TCDDemiryollari”
နိုင်ငံတော်သမ္မတအာဒိုဂန်: "တူရကီနှင့်တရုတ်ဘုံအနာဂတ် ...
၀ မ်းနည်းဖွယ် Kardemir နေ့ .. ၀ န်ဆောင်မှုမတော်တဆမှုတစ်ခုအတွင်းသေဆုံးခြင်း…